कहाँ सजिलो छ र असल शिक्षक बन्न ! असल शिक्षक बन्न यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् - ज्ञानविज्ञान
शिक्षक हुनु भनेको विद्यार्थीको मन मस्तिष्कलाई प्रज्ज्वलित पार्नु हो । अनुशासन, नैतिकता, सत्मार्ग सिकाउने शिक्षकहरू सधैँ सहनशील, धैर्य, समानतावादी, सरल, शिष्ट एवं नम्र हुनुपर्छ । किनकी शिक्षकको व्यवहार हेरेर विद्यार्थीले शिक्षकको अनुशरण गर्छन् । विद्यार्थीलाई शिक्षाप्रतिको भोक पनि शिक्षकले नै जगाउनु पर्छ । त्यसपछि जिज्ञासाको भोक मेटाउने काम पनि शिक्षककै हो । शिक्षण विधि केवल तथ्य स्मरण गराउने खालको मात्रै नभई व्यवहारिक एवं प्रयोगात्मक हुनु पर्छ ।
सामान्यतया आफूले जानेको बुझेको कुरा अरुलाई सिकाउने व्यक्ति शिक्षक हो । तर आप्mनो ज्ञान, सीप, कलादेखि आप्mनो आदर्श एवं मूल्य मान्यता पनि प्रष्टसँग व्यावहारिक रूपमा सिकाउन सक्ने व्यक्ति मात्रै असल शिक्षक बन्न सक्छ । केवल पाठ्यपुस्तकमा भएको वाक्य एवं हरफहरू पढेर सुनाउने काम मात्रै शिक्षण कार्य होइन । विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विभिन्न उदाहरणसहित विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन गरेर विद्यार्थीको रुचि, स्तर एवं क्षमता अनुसारको व्यावहारिक ज्ञान दिनु पनि शिक्षकको कर्तव्य हो ।
पढाउँदा मात्रै नभइ शिक्षकले आप्mनो बोली, व्यवहार, आचरण एवं पहिरनमा सधैँ नै विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । शिक्षकको बोली सरल, प्रष्ट, नम्र एवं नेतृत्वदायी हुनु पर्छ । विद्यार्थीलाई समान बोली र व्यवहार प्रदर्शन गनुपर्छ । शिक्षकको काम पढाउने, कक्षाकार्य गराउने, गृहकार्य गराउने अनि उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा मात्रै सीमित नगरी विद्यार्थी एवं अभिभावकलाई पनि अनुशासन, नैतिकता, चरित्र, आचरण र सत्मार्ग सिकाउन सक्नुपर्छ ।
शिक्षक आफै बलेर प्रकाश छर्ने व्यक्ति हो । भनाईको तात्पर्य शिक्षकले अरुको आचरण परिवर्तन गर्नु अघि आफैँ उदाहरण बन्नुपर्छ । भनिन्छ संसारलाई बदल्नु छ भने शुरु आफैँबाट गनुपर्छ । त्यसैगरी शिक्षकको जवाफदेहिता अभिभावक र समुदायप्रति रहनै पर्छ । त्यसैगरी समाजमा ज्ञान, सीप बाँड्ने शिक्षकहरूलाई समाजले पनि उचित आदर सम्मान गर्न कञ्जुस्याँई गर्नु हुँदैन ।
शिक्षकहरूसँग विवेक विचार र ज्ञानको शक्तिशाली हतियार हुन्छ । तर असल शिक्षक बन्न शिक्षक आफैँ निरन्तर जिज्ञासु हुनुपर्छ । निरन्तर सिक्नु, ज्ञान प्राप्त गर्नु, सिकेको ज्ञान सीप र कलालाई निरन्तर बाँड्न, विस्तार गर्नु परिमार्जन गर्नु र झन् उन्नत र परिस्कृत ज्ञानराशी निर्माण गर्नु एउटा शिक्षकको चरित्रगत एवं पेशागत धर्म हो । आफ्ना विद्यार्थी समाज अनि राष्ट्रका लागि आवश्यक ज्ञान विज्ञान र प्रविधिमा शिक्षकको अधिकार रहनै पर्छ ।
विषयवस्तुको यथेष्ट जानकारी, पेशाप्रतिको लगाव, पेशागत अनुशासन, कक्षा व्यवस्थापन, विद्यार्थीको रुचि, क्षमता एवं स्तरको राम्रो जानकारी राखेर पढाउन सक्ने शिक्षकहरू नै सफल शिक्षक मानिन्छन् । परम्परागत रूपमा केवल घोकाउने, रटाउने, विद्यार्थीलाई शारीरिक सजाय मात्रै बढी दिने, तर्साउने अनि विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने शिक्षक वास्तविक शिक्षक नभई शिक्षक नामधारी व्यक्तिमात्रै हुन् ।
तथ्य स्मरण गराउनै पर्ने भएपनि विभिन्न सुत्रहरू बनाएर सजिलो गरी विद्यार्थीको क्षमता अनुसार रमाइलो वातावरणमा गर्न सकिन्छ । समय सापेक्ष शिक्षण गर्न शिक्षकलाई समय समयमा पुनर्ताजगी तालिम दिईनु पर्छ र त्यस्तो तालिम लिन शिक्षक पनि अग्रसर बन्नुपर्छ ।
शिक्षकले जातीय समानता, लैङ्गिक समामनता, वैचारिक समानता, वर्गीय समानता जस्ता विषयमा संवेदनशील भएर बोल्न र व्यवहार गर्न पर्छ । शिक्षकहरूले नेताले जनतालाई दिने फुस्रो आदर्श र भाषण गरेजस्तो झुटो बोली र व्यवहार गर्नु हुँदैन । मुखले जे कुरा विद्यार्थीका अघि भनिन्छ त्यही कुरा आप्mनो वास्तविक जीवनमा हरहमेशा लागु गर्न शिक्षक तयार रहनुपर्छ ।
शिक्षकले विद्यार्थीलाई म जे भन्छु त्यो नगर भनेर आदर्शको ढोङ देखाउने काम गर्नु हुँदैन । रूपान्तरणको कुरा गर्नेले जात जातीय र भाषिक राज्यको वकालत गरेर निश्चित समुदायको मात्रै पृष्ठपोषण गर्ने काम शिक्षकले कहिल्यै गर्नुहुँदैन । हामी शिक्षकहरूले पढाउँदा गर्ने कुराहरू सधैँ सम्झेर वास्तविक जीवनमा लागु गर्न सक्नु पर्छ । शिक्षकले सधैँ मैले पढाएको, सिकाएको, भनेको कुरा अनि काम र मैले गरेको व्यवहारमा के कति भिन्नता छ भनेर स्व मूल्याङ्कन गनुपर्छ ।
असल शिक्षकहरूले नै असल नेता, शासक, प्रकाशक जन्माउन सक्छन् । त्यसैगरी विद्यार्थीहरूको रुचि, इच्छा, क्षमता अनुसार पढाउन सक्ने व्यक्ति मात्रै शिक्षण पेशामा सफल हुन सक्छ । पहिले पहिले ज्ञान, सीप र कलालाई सबैको पहुँच र अधिकार क्षेत्र भित्र पु¥याउन शिक्षकले मात्रै महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका हुन्थे तर विज्ञान र प्रविधिको विकास र विस्तारले वस्तु र सेवा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छैनन् । हिजोआज इन्टरनेटको सहायताले ज्ञानको भण्डारलाई सबैका निम्ति सहज, सरल र सुगम पनि बनाइदिएको छ ।
एकजना शिक्षकले हजारौँ डाक्टर पाइलट, इञ्जिनियर, व्यापारी उत्पादन गर्छ तर हजाराँै डाक्टर, पाइलट अनि व्यापारीहरूले एकजना पनि असल शिक्षक उत्पादन गर्न सक्दैनन् । तसर्थ समाज रूपान्तरण गर्न शिक्षकले अहम् भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।
असल शिक्षक बन्न यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् :
१. कक्षाकोठा व्यवस्थापन
कक्षाकोठामा छिर्नेबित्तिकै सोच्नुहोस् कि तपाईं विद्यार्थीको आँखामा सुपर हिरोको भूमिकामा हुनुहुन्छ । कक्षामा विद्यार्थीसँग असल र नम्र भएर वार्तालाप गर्नुहोस् । तपाईंको व्यवहार र हाउभाउको आधारमा विद्यार्थीले तपाईंलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने निर्धारण गरेका हुन्छन् । विद्यार्थीको उमेर समूहअनुसार फरकफरक व्यवहार गर्नुहोस् ।
२. उद्देश्य निर्धारण गर्नुहोस्
तपाईं कक्षामा के उद्देश्य लिएर छिर्नुभएको छ, पहिले नै निर्धारण गर्नुहोस् । विद्यार्थीले के सिकून् भन्ने अपेक्षा तपाईंले राख्नुभएको छ, सोही अनुसार पढाइलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । पाठ योजना बनाउँंदा नै यस विषयलाई प्राथमिकता दिनुहोस् ।
३. कक्षाकोठालाई शान्त बनाउनुहोस्
जहिले पनि शान्तपूर्ण वातावरणमा पढाउनुहोस् । एकआपसमा कुराकानी गर्ने तथा शिक्षक र विद्यार्थीबीच अन्तरसंवाद हुन सकेन भने सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी नहुन सक्छ । तर कक्षालाई शान्त बनाउने नाममा शिक्षक विद्यार्थीको अन्तरसंवादलाई शून्य बनाउनु हुँदैन ।
४. विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्नुअघि विद्यार्थीलाई मौखिक प्रश्न सोध्नुहोस्
पुस्तकमा भएको विषयवस्तुअनुसार सीधै पढाउँदा सम्बन्धित विषय विद्यार्थीलाई अनौठो लान सक्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई पृष्ठभूमि बताउनेगरी मौखिक रूपमा नयाँनयाँ विषयवस्तुबारे सोध्नुहोस्, जसले विद्यार्थीलाई किताब पढेपछि अझ धेरै ज्ञान दिन सकोस् ।
५.सकारात्मक सोचका साथ प्रतिस्पर्धा गराउनुहोस्
विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन एकआपसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको भावनाको विकास गराउनुहोस् । कुन विषयमा कुन विद्यार्थीले धेरै लेख्न सक्छ वा व्याख्या गर्न सक्दछ भन्ने बानीको विकास गराउनुपर्दछ । जसले विद्यार्थीलाई रचनात्मक र मेहनती बनाउनसमेत मद्दत पुर्‍याउँदछ ।
६. पाठयोजना बनाउन नबिर्सनुहोस्
हरेक कार्य सम्पन्न गराउनका लागि योजनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले शिक्षकले पनि पाठयोजना बनाएरमात्र कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नुपर्दछ । शिक्षकले वर्षभरिमा कुन एकाइलाई कति दिन पढाउनेदेखि लिएर कुन दिन कक्षामा छिरेको समयमा के के पढाउने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट योजना बनाउनुपर्दछ ।
असल शिक्षकको दायित्व :
शिक्षकहरू नै समाजको बौद्धिक व्यक्तित्व हुन् । गुरुकुल शिक्षा पद्धतिको संस्कारबाट प्रेरित हाम्रो पूर्वीय वाङ्मयमा शिक्षकको महŒव झनै बढी देखिन्छ । शिक्षकलाई आदर्श र प्रेरणाको स्रोतका रूपमा लिइन्छ । तसर्थ, शिक्षक बन्दा उच्च श्रेणीका अब्बल मानिएका व्यक्तिलाई छनोट गर्ने प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । शिक्षक जहिले पनि पठनशील भने हुनुपर्छ ।
शिक्षकहरूको पठन संस्कृतिका सन्दर्भमा खासै भरपर्दो वैज्ञानिक सर्वेक्षण भएको भेट्टाइएको छैन तर पनि सामान्य बुझाईमा पठनशील शिक्षकको सङ्ख्या न्यून छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्रविधिले ओगटेको वर्तमान बजारमा पुस्तकालयको प्रयोग कम हुन गए पनि विद्यालयमा पुस्तकालयको कम महत्व भने मान्न सकिँदैन ।
विद्यालयको पुस्तकालयबाट शिक्षक, विद्यार्थी दुवैले लाभ उठाउन सक्छन् तर विगतमा जस्तो पुस्तकालय खोल्ने लहर कमजोर बन्दै गएकोले पनि पठनीय संस्कृतिमा ह्रास आएको छ तर विना पठनीय संस्कृति शैक्षिक गुणस्तरको कल्पना गर्न सकिँदैन । साथै शिक्षक वर्गमा हौसला र प्रोत्साहनको पनि त्यत्तिकै खाँचो पर्छ ।
एउटा कुन्ठित र उदासिन शिक्षकबाट अपेक्षित सुधारको आशा गर्न सकिँदैन । राष्ट्र र समाजको समृद्धिका लागि पनि गुणस्तरीय शिक्षा चाहिन्छ । यसर्थ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण गर्दा मुलुकको विविधता तथा समयको आवश्यकतालाई ख्याल गरिनुपर्छ । वर्तमान समय र प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्ने शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नु आजको राष्ट्रिय दायित्व हो ।
विद्यमान शिक्षा ऐन नियममा टेकी स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रिय शिक्षा नीति आयोग बनाउने र यसै आयोगद्वारा प्रभावकारी परिचालन गरी शिक्षा नीति, निर्माण, कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिने भने पनि हालसम्म खासै केही हुन सकेको छैन । यस आयोगले संविधानअनुरूप राष्ट्रिय, प्रान्तिय र स्थानीय तह अनुरूपको समयसापेक्ष ढङ्गको शिक्षा नीति निर्माण गरी लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको दायित्वमा राखिएको छ । संविधान लागू भएको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि शिक्षा केन्द्रीय निकायकै नियन्त्रणमा सञ्चालन भएको छ । स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि पनि निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिले संविधानले तोके मुताबिकको अधिकार उपभोग गर्न नपाउँदा अरू अन्योलको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । यो स्थिति सिर्जना हुनुमा वर्तमान अवस्था मात्र जिम्मेवार नभएर विगत देखिका कमीकमजोरी जटिलताबाट पेचिलु बन्न पुगेको छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ शिक्षा नीतिको जरुरी थियो तर राजनीतिसँगै शिक्षा नीति परिवर्तन हुन सकेन । फलस्वरूप सामुदायिक विद्यालय नाजुक हँुदै जान थाले । २०६३ सालको परिवर्तन पछि पनि शिक्षा क्षेत्रप्रति बेवास्ता नै गरियो । २०७२ साल असोजमा गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान आयो । संविधानअनुसारका ऐन, नियम मुलुकले पाउन सकेन । शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा सभासदले लामो समयसम्म खासै चासो राखेनन् ।
बल्ल २०७३ साल मध्येतिर आएर ऐन संशोधन भयो, यस ऐनअनुसार प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि आठसम्म आधारभूत र कक्षा नौ देखि १२ सम्मलाई माध्यामिक तह मानेर शिक्षाको संरचनामा फेरबदल ल्याएको छ । अर्को पक्ष कक्षा नौदेखि प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न पाउन व्यवस्था गरिएअनुरूप १२ कक्षा पछि पनि एक वर्ष व्यावहारिक अभ्यास गराइने प्रावधान राखेको छ । यस ऐनले उच्च माध्यामिक शिक्षापरिषद् खारेज गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरेको छ ।
हुन त नयाँ संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारलाई जिम्मा लगाउने उल्लेख गरिएको छ । यस अर्थमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पनि औचित्य देखिँदैन । आज देशले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था स्वीकारी संविधान लागू भइसकेको सन्दर्भमा विगत केही यता निर्माण भएका ऐन, कानुन तत्काल फेर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा हाम्रो शिक्षा नियम पनि फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
वर्तमान संविधान २०७२ ले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने भने पनि सरकारले यस विषयमा कार्यान्वयनतर्फ लैजाने खासै पहल गरेको देखिँदैन । सरकारी काम कारबाहीको ढिला सुस्ती, अनुगमन र नियमन नै कमजोर र फितलो भइरहेको बेला प्रभावकारी कार्यान्वयनको के अपेक्षा राख्ने ? सरकारी विद्यालयको लगानीअनुरूपको प्रतिफल छैन, प्रविधितर्फ आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन ।
पाठ्यक्रम विद्यालयमा हेरिँदैन, पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीले पाउन सक्तैनन, कतिपय शिक्षक दलका झोले बन्छन् । शिक्षकले राजनीतिमा लाग्न नमिल्ने नियम बनाइएको छ । त्यो व्यवहारमा लागू हुन सक्तैन । सबै शिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था हुन सकेको छैन । समग्रमा विद्यालयमा राम्रो गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था छैन । राजनीतिक नेतालाई राम्रो शिक्षक होइन, हाम्रो शिक्षक चाहिएको छ ।
विद्यालयमा राम्रा शिक्षक भए भने तिनबाट अभिभावको भूमिका पनि निर्वाह हुन सुक्छ । अहिले कतिपय ठाउँमा शिक्षक र अभिभावक दुवै एकअर्कालाई दोषी देखाउन खोजी आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्छन् । सबैका बीच आपसी अन्तक्र्रिया छलफल र विमर्श आदिका माध्यमबाट सही कुरा पत्ता लगाई मिलिजुली समाधानको बाटो पहिल्याउनुमा नै सबैको भलो हुने कुरामा ध्यान जानु जरुरी छ ।
विद्यार्थीले पढाइमा ध्यान दिनका लागि पढाइ रोचक र कक्षा कोठाको वातावरण रमाइलो बनाइनु असल शिक्षकको गुण हो । शिक्षक आफ्नो विषयमा दक्ष र सक्षम बन्न सक्नुपर्छ । शिक्षकले आफूलाई विद्यार्थीका अगाडि हाउगुजी बनाउनुहुँदैन ।
शिक्षकले राम्रोसँग नसिकाई विद्यार्थीले सिक्न सक्तैनन् । विद्यार्थीमा पठनपाठन गरिने विषयवस्तु सिक्ने उत्सुकता नहुनुमा दोषी शिक्षक ठहर्छ । शिक्षकको मनो सामाजिक रुचिअनुसार सिकाउने नयाँ–नयाँ प्रविधि र विधि खोज्ने उत्साह र इच्छा रुचि चाहिन्छ । केटाकेटीमा नयाँ सोच र चाहनाको खोजी भएको अवस्थामा शिक्षक भने उही पुरानो परम्परागत प्रविधि र विधिमै अलमल्याउन खोज्ने भए भने केटाकेटीमा त्यस्तो सिकाइप्रति उत्सुकता हुँदैन ।
कतिपय नजान्ने विद्यार्थी जान्न कोसिस गर्दैनन् । अध्ययनमा ध्यान दिएर पनि नजानेका हुन कि जान्न नखोजेको हो वा शिक्षकले पढाउन नजानेर हो ।आखिरमा कक्षाकोठामा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी क्रियाशील हुनु जरुरी छ । विद्यार्थीका मनका कुरा शिक्षकले सुन्नुपर्छ । उनीहरूको समस्या के हो ? राम्रोसँग नबुझी समाधानको खोजी हुन सक्तैन ।
विद्यार्थीका स–साना दोष केलाएर गलत साबित गराउने प्रकृतिमा सुधार आउनु जरुरी छ । अबका विद्यार्थीमा कमजोर पक्ष कोट्याएर होइन सबल पक्ष देखाएर कुरा गर्नुपर्छ । तिमी ज्ञानी छौँ, बुद्धिमान छौँ, तिमीलाई पढनु छ भनेर हौसाएर पढाउनुपर्छ । शिक्षकले आफूलाई साथीका रूपमा सहजकर्ताका रूपमा कक्षा कोठामा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । कक्षा कोठाभित्र समान सिकाइ क्षमताका विद्यार्थी हँुदैनन् । त्यहाँ सुनेर सिक्ने, पढेर सिक्ने हेरेर सिक्ने, छोएर, गरेर सिक्ने आदि क्षमताका विद्यार्थी हुन्छन् । जुन विद्यार्थी जुन विधिद्वारा सिक्छन् सोही विधिको प्रयोग गरेर रमाइलो वातावरणमा सिकाउने सक्ने शिक्षक नै आजको आवश्यकता हो ।
यो भिडियो तपाईको जीवनलाई काम लाग्नेछ :
Don't Miss it अशान्त संसारमा मनको शान्ति – यस्तो छ मनको आनन्द मिल्ने तरिका
Up Next नेपालमा उद्दमी नै किन बन्ने ? सुन्दा अचम्म लाग्छ तर एक पटक पढ्नुहोला
एलर्जी गराउने खाद्य पदार्थ १. सोयाविन २. मकैको सेवन ३. माछा ४. गाईकेा दूध वा अन्य दूग्धजन्य उपात्दन ५. ग्लुटेनयुक्त…
के के कुरा खानुहुँदैन दूधसँग ? जान्नुहोस
माछा माछा खाएपछि दूध पिउँदा पेटमा अम्ल उत्पन्न हुन्छ र खाना नपच्ने र पेट दुख्ने समस्या आइलाग्छ । नून दूधसँग…
कस्ता प्रकारका पुरुष धोकेवाज हुन्छन ? जान्नुहोस
१. अन्तिम समयमा आएर बाहाना कुनै पनि पुरुषले अन्तिम समयमा आएर बहाना बनाउँछ र भेटघाट वा सेट भैसकेका कुरा समेत…
शास्त्र अनुसार कस्ता ब्यक्तिलाई अभागी भनिएको छ ?
शास्त्र अनुसार यी तीन कुरा भएका ब्यक्तिलाई अभागी भनिएको छ । चाणक्य नीति भन्छः वृद्धकाले मृता भार्या बन्धुहस्ते गतं धनम्।…
यस्ता छन् जाडोमा नियमित कफी पिउनुका फाइदा
जाडो भन्ने बित्तिकै धेरैलाई तात्तातो चिया वा कफीको याद आइहाल्छ । अझै विशेषगरि युवापुस्तामा कफीको मोह धेरै बढ्न थालेको छ…